Ibidda gaara Saannatee: "Humna namaa gahaa osoo qabnuu ibiddicha dhaamsuu hin dandeenye" - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Gaarreen Baalee har'aa haala kanaan gubataa jira
Balaan ibiddaa Paarkii Biyyaalessaa Gaarreen Baalee gaara Saannatee bosona saatoo irratti qaqqabe osoo hin dhaamiin guyyoota afur lakkoofsiseera.
Paarkiin Biyyaalessaa kun yeroo ji'a lama hin guutne keessatti si'a lamaffaa gubachaa jira jedhameera.
"Humna namaa gahaa osoo qabnuu ibiddicha dhaamsuu hin dandeenye" kan jedhan itti gaafatamaan Paarkii Biyyaalessaa Gaarreen Baalee Obbo Aschaaloo Gaashaaw balaan ibiddaa kun guyyaa Jimaataa aanaa Gobbaa iddoowwan lamatti jalqabuusaa BBCtti himan.
Ibiddi iddoo Itittuu Suraa jedhamutti qaqqabe kaleessa galgala to'atamuusaafi kan Faasil Angassoo jedhamutti qaqqabe garuu hanga ammaatti akka hin dhaamne Obbo Aschaaloon himaniiru.
Ibidda bosona gaara Cilaaloo to'achuun maaf yeroo dheeraa fudhate?
"Ibiddi kun bakkawwan sululaafi hallayyaa keessa ta'an keessaa dhaamsuuf rakkisaa ta'etti qaqqabe waan ta'eef osuma humna namaa gahaa qabnuu dhaamsuu hin dandeenye," jedhan itti gaafatamaan Paarkichaa.
Balaan ibiddaa gaara Saannatee yeroo ji'a tokko hin guunne keessaatti si'a lammaffaaf qaqqabe.
Ibidda gaara Saannatee dhaamsuuf uummanni aanaa Gobbaa, raayyaan ittisa biyyaa, miseensoonni Poolisii Oromiyaa, hojjetoonni waajjiraalee mootummaafi hojjettoonni Paarkichaa waliin tumsaa akka jiran ammoo itti gaafatamaa Waajjira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Aanaa Gobbaa Obbo Girmaa Mul'ataatu BBCtti hime.
Balaan ibiddaa torbeewwan muraasa dura Paarkicha qaqqabe lafa hektaara 150 hanga 200 ta'u gubusaatu himama. Namoonni ibiddicha qabsiisuun shakkamanis to'annoo jala oolun isaanii ni yaadatama.
Itti gaafatamaan Paarkii Biyyaalessaa Gaarreen Baalee Obbo Aschaaloo Gaashaaw gubachuu gaara Saannateef namoonni keessoofi naannoo Paarkichaa jiraatan dheedicha looniif jecha, bineeldootni isaanii beeyladoota bosonaa kan akka qeerransaan akka hin nyaatamneef bosonatti ibidda akka qabsiisan, akkasumas hidda muka asxaa gurgurachuuf jecha ibbidda bosonatti akka itti qabsiisan shakkina jechuun BBCti himaniiru.
Namoota Paarkicha keessatti loon horsiisan Paarkicharraa ittisuun humna keenyaa ol ta'eera kan jedhan Obbo Aschaaloon mootumman jireenya namoota kunneenii jijjiiruuf hojjechuu qabas jedhan.
Bosonni UNESCOtti galmaa'e Shakkaan gubachuun barame
Viidiyoo Baalee Roobee: Maatii kanniisa waliin mana tokko qooddatan
Dubartiin waggoota 27f of wallaaltee turte of barte